Jules Henri Poincaré: ny fizotry ny famoronana amin'ny dingana 4 | Famoronana an-tserasera
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe toy ny ahoana ny taolam-panorona? Inona ireo dingana mandrafitra azy? Ahoana no ahafahantsika mankasitraka azy hanatsara ny famoronana? Androany aho manolotra anao horonan-tsary mahafinaritra an'i Sandra Burgos, mpiara-miasa aminay, izay teny an-dalana, androany fitsingerenan'ny andro nahaterahany, noho izany dia andefasanay fofona lehibe avy eto izy.
Mampahatsiahy anao aho fa afaka mahita ny habaka Coaching 30k anao ianao tranokalan'izy ireo ary avy amin'ny azy Fantsona YouTube, tena soso-kevitra tokoa. Azoko antoka fa any ianao no hahita atiny izay hahaliana anao indrindra. Indraindray isika dia manadino ny maha-zava-dehibe ny fihetsitsika sy ny fiantraikany eo amin'ny fiainantsika. Ity dia iray amin'ireo habaka izay manampy antsika hahatadidy azy io ary mieritreritra doka fanampiny amin'ny antony manosika sy fanantenana.
Ny fahaiza-mamorona, amin'ny maha-mikraoba ny fototry ny fivoaran'ny zanak'olombelona, ​​dia iray amin'ireo mistery nojerena indrindra nandritra ny tantara, na dia amin'izao fotoana izao aza dia mbola iray amin'ireo saha nanaovana fikarohana sy famotopotorana be indrindra an'ny faritra rehetra izy: Avy amin'ny siansa, psikolojia na filozofia. Fa maninona no manjavona ny aingam-panahy ary voasakantsakana indraindray ny fizotrantsika ny famoronana? Fa maninona isika no mahatsapa aingam-panahy bebe kokoa andro vitsivitsy noho ny hafa? Ireo dia fanontaniana sarotra kokoa noho ny mety hinoantsika ary mba hamaliana azy ireo dia ilaina ny fahafantarantsika ireo dingana amin'ny fizotry ny famoronana sy ny fanadihadiana ary ny fanadihadiana izay novolavolaina rehefa nandeha ny fotoana. Avy eo avelako miaraka amin'i Sandra ianao, izay hiteny amin'ny fomba tsotra sy mazava tsara momba io lohahevitra io. Azonao atao koa ny miditra amin'ilay kinova horonantsary etsy ambany.
Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no nanombohan'ny matematika Jules Henri Poincaré Sambany izy no niresaka momba ireo dingana 4 mandrafitra ny fizotry ny famoronana ary mbola manan-kery mandraka ankehitriny. Ny vaovao ratsy dia ny iray amin'ireo kianja ireo dia tsy miankina aminao; Fa ny vaovao tsara dia ny ataon'ireo telo hafa, ary arakaraka ny iasanao azy ireo no mampitombo ny fitaomana ankolaka anao amin'ilay iray izay tsy miankina aminao. Andao hojerentsika izy ireo!
Ny dingana voalohany amin'ny fizotran'ny famoronana dia ny fiomanana, izay misy ny fandinihana ny olana, ny firotsahana ao anatiny, ary ny fanangonana vaovao betsaka araka izay azo atao momba izany. Eritrereto ny lohahevitra tianao hipoitra miaraka amin'ny hevitra mamorona ary atsofohy izy. Vakio izay azonao atao rehetra, mitady horonantsary na lahateny momba an'io lohahevitra io ary fantaro tsy an-kijanona.
Ny dingana faharoa amin'ny fizotry ny famoronana dia ny fampidiran-drano. Raha vantany vao nandraisana fampahalalana betsaka araka izay azo atao momba ny lohahevitrao ianao, dia tadidio mandritra ny hetsika ataonao isan'andro sy ny fifandraisanao. Ampifandraiso amin'ny zavatra rehetra iainanao ary jereo izany amin'ny lafiny rehetra. Amin'ity dingana ity dia hieritreritra zavatra maro tsy misy dikany aminao ianao, satria ny momba izany dia ny fanangonana hevitra rehefa mipoitra izy ireo, nefa tsy mitsara azy ireo, na dia mandrisika hadalana kely momba izany aza.
Ny dingana fahatelo, ny fahazavana, no iray miankina aminao kely indrindra, satria fotoana iray manandanja amin'ny fizotry ny famoronana, dia hiseho izany, angamba, rehefa tsy manana izany ianao. Io no fara-tampon'ny fizotrany ary matetika no miavaka amin'ny fisian'ny hevitra na fahitana revolisionera momba io lohahevitra io.
Ary farany, ny dingana fahefatra sy farany amin'ny fizotrany dia ny fanatanterahana. Tsy misy olona azo raisina ho mamorona raha toa ka manana hevitra mahafinaritra be fotsiny. Ny famoronana dia mitaky famoronana. Amin'ity dingana ity dia hampiharinao amin'ny fampiharana ny hevitra revolisionerao ary ny zava-dehibe indrindra tsy tokony ho adino amin'izao fotoana izao dia ny fikirizana.
Ny fizotry ny famoronana rehetra dia mandalo fahombiazana, hadisoana, fotoana tsara ary fotoanan'ny krizy. Ny fihetsikao sy ny fanolorantenanao dia miankina amin'ny fahaizanao manatanteraka ny hevitrao. Ary ireo no dingana 4 amin'ny fizotry ny famoronana. Araka ny hitanao dia mailaka be izy ireo ary miankina aminao ny ankamaroan'ny fizotranao ary ny fanapahan-kevitrao tsy handao raha tsy tonga ilay hevitra revolisionera antenainao hamokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Jules Henri Poincaré: ny fizotry ny famoronana amin'ny dingana 4
Modely HTML / CSS 20 maimaimpoana